By Yoe Ma Lan 2:03 AM
သင့်ချစ်သူကောင်မလေး ဒီအချစ်ရေးကို လက်လျှော့အဆုံးသတ်ချင်နေပြီဆိုတာ ဒီအချက်တွေကတစ်ဆင့် သိနိုင်
သတင်းကောင်းကတော့ သင်ဟာ ခုပြောပြပေးမယ့်အချက်တွေကို ဂရုစိုက်မိပြီး သူမကို လက်မလွှတ်ချင်ဘူးဆိုရင် သူမကို ပြန်ဆွဲထားနိုင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ သင့်ချစ်သူကောင်မလေးဟာ ခုပြောမယ့် အချက်တွေအတိုင်း ပြုမူနေတယ်ဆိုတာကို သိလိုက်တာနဲ့ သင်တုံ့နှေးလို့ မနေပဲ သူမ သင့်ဆီပြန်စိတ်လည်လာအောင် ကြိုးစားပါ။ သူမ စိတ်ကုန်သွားစေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သင်ပြုလုပ်မိနေတယ်ဆိုရင် ဒါတွေကို ပြုပြင်လိုက်ပါ။ ညှိုနှိုင်းသင့်တာတွေ ညှိုနှိုင်းပါ။ သူမ စိတ်ထဲရှိနေတာတွေကိုနားထောင်ပေးပါ။ ဒါ့ကြောင့် အချိန်မီလေး ဘယ်လိုအချက်တွေကများ သင့်ချစ်သူဟာ ဒီအချစ်ရေးကို လက်လွှတ်လိုက်တော့မယ်ဆိုတာ သိသာစေသလဲဆိုတာကို ခုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။အရင်ကလို မဟုတ်တော့ပဲ သူမ သင့်အပေါ် ဆူညံပူညံတွေ သိပ်မလုပ်တော့ဘူး။
အရင်က မကျေနပ်တာတွေကို အပြစ်တင်တတ်တဲ့သူမက ခုဆို ဘာမှ သင့်ကိုပြောနေမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ သူမ မကြိုက်တာတွေ သင်လုပ်နေလည်း သူမက မသိသလိုသာ ပြုမူနေပါလိမ့်မယ်။ အရင်ကလည်း စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာမျိုးလည်း သင့်ကို မလုပ်တော့ပါဘူး။
သူမဟာ အရင်ကထက်ပိုပြီး အလုပ်မှာ နစ်မျောလာတယ်။ သင်နဲ့တွေ့ဖို့အချိန်တွေမှာတောင် အလုပ်မအားတာကြောင့် မတွေ့ဖြစ်တာမျိုးတွေ ရှိလာတယ်။ ကိုယ်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ အရာတွေအတွက်၊ ကိုယ်ခံစားနေရတဲ့ ခံစားချက်တွေကို လျစ်လျူရှုခံရတဲ့ သူတွေ၊ ချီးမွမ်းစကားလေးတစ်ခွန်းတောင် နားမထောင်ရတဲ့သူတွေဟာ အခြားတစ်ခုကို ပိုအာရုံစိုက်သွားတတ်ကြတာ သဘာဝပဲလေ။
၃။သူမရဲ့ ပြင်ပသွားလာမှုတွေမှာ သင်မပါဝင်တော့ဘူး။
အလုပ်ပြီးလို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားတဲ့အခါ အရင်ကလို သင့်ကို မခေါ်တော့ဘူး။ မိဘတွေနဲ့ ထမင်းအတူ လက်ဆုံစားကြတဲ့အခါမှာလည်း အရင်ကလို သင့်ကိုမဖိတ်တော့ဘူး။ ပန်းချီပြပွဲသွားတာ၊ ရှိုးပွဲသွားတာ စတာတွေမှာ လည်း သင့်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ မခေါ်တော့ဘူး။
၄။သင့်အမြင်က ဘာဆိုတာ သူမ ဂရုမစိုက်တော့ဘူး။
အရင်က တစ်ခုခုကို ဖွင့်ပြောတိုင်ပင်နေကျ ကိစ္စရပ်တွေမှာ သူမ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူမ ကျေနပ်နေတတ်ပြီ။ သင့်အမြင်က ဘာလဲဆိုတာ သူမ စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာရပ်တည်နိုင်တယ်ဆိုတာ သင့်ကိုခုလိုနည်းနဲ့ ပြသလာခဲ့ပြီ။
အရင်က စိတ်သိပ်မတိုတတ်တဲ့သူမက ခုတော့ တစ်ခုခုဆိုတာနဲ့ ဒေါသထောင်းခနဲ ထွက်လာမယ်။ သင်တစ်ခုခုပြောလိုက်တာနဲ့ သည်းခံချင်စိတ်မရှိတော့ပဲ၊ ညှိုနှိုင်းတာမျိုးတွေ မရှိတော့ပဲ လုပ်ချင်တာလုပ်ဆိုပြီး သင့်အနားက အမြန်ဆုံး ထွက်သွားမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ စိုးရိမ်စရာအချက်ဖြစ်လာပါပြီ။
------------------------------------------------------------------------------------- သတင်းကောင်းကတော့ သင်ဟာ ခုပြောပြပေးမယ့်အချက်တွေကို ဂရုစ...
By Yoe Ma Lan 1:59 AM
လေလည်အနံ့ လို ပုပ်အဲ့တဲ့အနံ့တွေ ရှူရှိုက်ခြင်းက ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်ပေးနိုင်
လေလည်တဲ့အနံ့ ကို ရှူရှိက်ခြင်းက ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ၊ လေဖြတ်နိုင်ခြေ၊ နှလုံးဖောက်နိုင်ခြေ၊ အဆစ်ရောင်နာ ဖြစ်နိုင်ခြေ နဲ့ စိတ်ဖောက်ပြန်မှုရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေတို့ ကို နည်းပါးစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။Exeter တက္ကသိုလ်က သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရ ကြက်ဥပုပ်၊ဘဲဥပုပ်တွေနဲ့ လူတစ်ယောက် လေလည်တဲ့အနံ့ မှာ ပါဝင်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဟာ ဆဲလ်ပျက်စီးမှုကို လျော့ပါးစေပြီး တစ်ချို့ ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင် တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
လူတစ်ယောက် အစာခြေဖျက်တဲ့အခါ အနည်းအကျဉ်းသာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလ်ဖိုဒ်ဓာတ်ငွေ့ ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေက လေ့လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ဂတ်စ်ဟာ ပမာဏ အများအပြား ရှူမိရင် အန္တရာယ်ရှိပေမယ့် ၊ ပမာဏအနည်းငယ်ကို ရှူရှိုက်ပြီး ဆဲလ်တွေနဲ့ ထိတွေ့ မိလို့ ရှိရင် ဆဲလ်တွေရဲ့စွမ်းအင်ကိုထုတ်ပေးတဲ့ Mitochondria ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဟိုက်ဒရိုဆာလ်ဖိုဒ်ဓာတ်ငွေ့ လျော့နည်းနေပြီဆိုရင် AP39 ဆိုတဲ့ ဒြပ်ပေါင်း အသစ်တစ်မျိုးက အသုံးဝင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဆိုပါတယ်။
“ ကျွန်တော်တို့ ဟာ AP39 ဆိုတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းအသစ်တစ်မျိုးကို ဖန်တီးပြီး ဒီသဘာဝဖြစ်စဉ်ကို အကျိုးရှိရှိ တုပနိုင်ပါပြီ။ AP39 ဟာ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလ်ဖိုဒ်ဓာတ်ငွေ့ အနည်းငယ်ကို ဆဲလ်တွေရဲ့ mitochondria အပိုင်းဆီ ဖြည်းညှင်းစွာ ပို့ ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ စမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေအရ ပျက်စီးနေတဲ့ဆဲလ်တွေကို AP39 ဒြပ်ပေါင်းနဲ့ ကုသကြည့်ရာမှာ mitochondria ပိုင်းကို ကာကွယ်မှုပေးပြီး ဆဲလ်တွေ ကျန်းမာစွာ ဆက်ရှိနေနိုင်တာ ကို တွေ့ ရှိခဲ့ရတယ်” လို့ Exeter တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခ Matt Whiteman က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီသုတေသနဟာ ပဏာမအဆင့်မှာသာရှိသေးပြီး ယခုအချိန်မှာ တိကျတဲ့ကောက်ချက်ချမှုတွေ တော့ ပြုလုပ်နိုင်ဦးမှာမဟုတ်သေးဘူးလို သိရပါတယ်။
--------------------------------------------------------------------------------------- လေလည်တဲ့အနံ့ ကို ရှူရှိက်ခြင်းက ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ၊ေ...
By Yoe Ma Lan 1:55 AM
ပုလင်း တစ်လုံးစီတွင် ရိုးရိုး သကြားသုံးဇွန်း (ဟင်းစားဇွန်း) စီထည့် ရပါမည်။ ပုလင်းများ တစ်လုံးစီတွင် ရှောက်၉ရွက် စီထည့်ပေးပါ။ေ၇ကျက်အေးများ ပုလင်းထဲသို့ အပြည့် ထည့်ပြီး အဆို့ပိတ်လျက် နေပူတွင် ကိုးရက် လှန်းပေးပါ။ ကိုးရက်စေ့လျှင် ဆေးဝါးအဖြစ် သုံးနိုင်ပြီ။ နံနက် တစ်ကြိမ်၊ ညတစ်ကြိမ် အဆိုပါေ၇ှာက်၇ွက် ဆေးရည်ပုလင်းကို လှုပ်ပြီး လက်ဖက်ရည် အကြမ်းပန်းကန် တစ်ဝက်ခန့်ကို မှန်မှန် သောက်သုံး သွားပေးပါ။
လစဉ် မြန်မာ လဆန်း တစ်ရက်နေ့၌ ရှောက်ရွက် နှစ်ရွက်၊ သုံးရွက် ကိုရှာပြီး စားဖြစ်အောင် စားထားရန် အမှာရှိသည်။ ထို့သို့ စားပေးခြင်းဖြင့် လေရောဂါများ မ၀င်ရောက်နိုင်၊ လေ ထိုး၊ လေအောင့်၊ လေငန်းရောဂါများ မ၀င်ရောက်နိုင်။ လေငန်း ရောဂါရှင်များ ရှောက်ရွက်၊ ငရုတ်ကောင်းနှင့် ကြက်သွန်ဖြူတို့ဖြင့် ဟင်းခါးချက် ကာ နေ့စဉ် သောက်သုံး ပေးခြင်းဖြင့် လေငန်း ရောဂါမှ သက်သာ ပျောက်ကင်း စေသည်။
-------------------------------------------------------------------------------------------------- အ၀လွန်သူများ၊ ဗိုက်ခေါက်ထူပြီး လာသော အမျိ...
By Yoe Ma Lan 1:48 AM
ဘ၀တစ်လျှောက် လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုပါက အသက် ၁၅၀ နှစ်ထိ အသက်ရှင်နိုင်ပြီ
လူသားတွေ လိင်ဆက်ဆံခြင်း မပြုပါက အသက် ၁၅၀ နှစ်အထိ အသက်ရှိနိုင်ဟု Biogerontology Research Foundation ခေါ် UK ဥာဏ်ကြီးရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ဗြိတိသျှလူမျိုးပါမောက္ခ Alex Zhavo Ronkov က Daily Mirror သတင်းသို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ စာအုပ်သစ် The Ageless Generation မှာ သူက ကာမဆက်ဆံခြင်း မရှိသောဘဝက ကျွန်ုပ်တို့ အသက် ပိုမိုရှည်စေနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံတာ အားအင်စုပ်ယူကုန်ခန်းစေတဲ့ အနှောင့်အယှက်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သူက ထပ်မံ သတိပေးထားပါတယ်။
နောက်ကျမှ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းနဲ့ ကလေးမွေးဖွားခြင်းက မိမိတို့ရဲ့ ဘဝသက်တမ်း အပြောင်းအလဲဖြစ်စေတဲ့ အကျိုးဆက် ဖြစ်ကြောင်း သူက ထပ်ပြောပါတယ်။
အဲဒီအစား လေ့ကျင့်ခန်းပုံလုပ်ပြီး အစားလျော့စားဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ သူကတော့ တစ်နေ့ ကယ်လိုရီ ၁၆၀၀ ကနေ ၁၇၀၀ ကြား စားသုံးတယ်။ အများစုမှာ သစ်သီး၊ ဒိန်ခဲနဲ့ ပရိုတိန်းဓာတ်တွေ ဖြစ်တယ်လို့ Zhavoonkov က ပြောပါတယ်။
အသက် ၁၅၀ ကျော် အသက်ရှင် နေထိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်မှာ သေဖို့ စီမံချက်လုံးဝ မရှိတာပါ။ ဘာမဆို ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သိမှတ်ပြီး အသက်ရှင်ဖို့သာ လိုအပ်ကြောင်း Zhavoronkov က နောက်ဆုံးစကား ပြောဆိုခဲ့တယ်။
မေးခွန်းကတော့… ကာမရသခံစားပြီး ခဏပဲ အသက်ရှင်မှာလား သို့မဟုတ် အသက်ရှည်ရှည်နေထိုင်သွားမလား ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ လူသားတွေ လိင်ဆက်ဆံခြင်း မပြုပါက အသက် ၁၅၀ နှစ်အထိ အသက်ရှိနိုင်ဟု Biogerontology Research Foundation ခေါ် UK ဥာဏ်ကြီးရ...
By Yoe Ma Lan 9:33 PM
စမတ်ဖုန်းမရှိတဲ့ နေ့တစ်နေ့ ရဲ့ ကောင်းကျိုး ( ၅ ) သွယ်
လူမှု မီဒီယာ တွေဟာ ယနေ့ခေတ် လူနေမှု ဘ၀တွေကို အကြီးအကျယ် လွှမ်းမိုးထားပါတယ်။ လူတွေဟာ လူမှု မီဒီယာကို စွဲလန်းမှုကြောင့် နေ့စဉ် အချိန်နာရီတွေထဲမှာ စမတ်ဖုန်းသုံးစွဲချိန်ကို ပါ ထည့်သွင်းထားရပါတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သာ စမတ်ဖုန်းနဲ့ တစ်နေကုန် ဝေးကွာနေမယ်ဆိုရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ။ ဒါကို Elite Daily ဆိုတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်က အခုလို အကောင်းမြင် ရှုထောင့်ကနေ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
၁။ မနက်ပိုင်း ရုံး(သို့) ကျောင်းကို နာရီဝက်ခန့် နောက်ကျခြင်း ကင်းဝေးသွားမယ်
လူတွေဟာ မနက် အိပ်ရာနိုးတာနဲ့ ပထမဆုံးရှာဖွေတာ စမတ်ဖုန်းပါ။ အိပ်ရာကနိုးတာနဲ့ မျက်နှာမသစ်ခင်မှာပဲ ဖုန်းကို ဖွင့်ပြီး လူမှုမီဒီယာ နဲ့ အီးမေးလ်က အသိပေးမှု တွေဖတ်ရှုလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ထံ စမတ်ဖုန်းမရှိတော့တဲ့ နေ့ဆိုရင် မနက်ပိုင်းမှာ နာရီဝက်လောက် အချိန်ပိုထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
၂။ လမ်းပေါ်မှာ (သို့) ဓါတ်လှေကားထဲမှာ တွေ့တဲ့လူတွေကို ဖော်ရွေစွာဆက်ဆံမိပါလိမ့်မယ်
အမှန် က သင်ဟာ မခင်တတ် မမင်တတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ အထိုက်အလျောက်တော့ ဖော်ရွေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်း စမတ်ဖုန်းနဲ့ မျက်လုံးနဲ့ မခွဲခွာတဲ့အတွက် လမ်းမှာ တွေ့နေကြ လူတွေကို သတိ မမူမိသလို ရယ်ပြ ၊ ပြုံးပြချင်းလည်း မဲ့နေပါလိမ့်မယ်။ ဖုန်းမရှိတဲ့ နေ့မှသာ သင့်ရဲ့ ဖော်ရွေမှုတွေကို သူတို့တွေ သိသွားမှာပါ။
၃။ အလုပ်တွေ အချိန်မီ ပြီးအောင် လုပ်နိုင်တာသိလာလိမ့်မယ်
ကျောင်း မှာဖြစ်စေ ၊ ရုံးမှာဖြစ်စေ ပျမ်းမျှအားဖြင့်အချိန်မီ ပြီးစီးနိုင်စွမ်းရှိနေတဲ့ အလုပ်ပမာဏ ထက် လျှော့ပြီးတော့သာ သင်ဟာ ကိုယ့်အရည်အချင်းကို တွေးထားမိနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အချိန်မီ ဆိုတဲ့ အတိုင်းအတာ မှာ လူမှုမီဒီယာ သုံးချိန်ပါ ပါဝင်လာတာကြောင့်ပါ။ စမတ်ဖုန်းမရှိတဲ့ နေ့ဟာ သင့်အတွက် အလုပ်အပြီးဆုံးနေ့ဖြစ်မှာပါ။
၄။ သင့်ရဲ့ ရုပ်ရည် အခြေအနေကို သင် စတင်မေ့လာမှာပါ
Selfie မရိုက်ရတဲ့ဘ၀ ဟာ တစ်ချို့ လူငယ်တွေအတွက် တော့ စိတ်ညစ်စရာကောင်းမှာပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လှလား ၊ ရုပ်ဆိုးလားတောင် သတိမထားမိနိုင်တော့ပါဘူး။ တစ်ခုတည်းသော အားနည်းချက်ကတော့ Selfie မရိုက်ရရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု မဲ့သွားတတ်သူတွေအတွက် မကြာမကြာ မှန်ထကြည့်ပေးဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
၅။ ဘာ Beef မှ စိတ်ဝင်စားစရာ မရှိတော့ပါဘူး
လူတွေ နေ့စဉ် လူမှု မီဒီယာ ပေါ်မှာ စိတ်ဝင်တစား ဖတ်ရှုတဲ့အထဲမှာ ပြဿနာ(BEEF) တွေက ထိပ်ဆုံးက ပါပါတယ်။ တေလာဆွစ်ဖ် နဲ့ နစ်ကီမီနာ့ဂ်ျ နဲ့ ပြဿနာ တက်လည်း ပရိသတ်တွေကပါ ၂ ခြမ်းခွဲပြီး လူမှုမီဒီယာ ပေါ်မှာ ရန်ဆက်ဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို Beef တွေကို မကြားရတဲ့အတွက် နားအေးပါးအေး ဖြစ်လာမှာပါ။
--------------------------------------------------------------------- လူမှု မီဒီယာ တွေဟာ ယနေ့ခေတ် လူနေမှု ဘ၀တွေကို အကြီးအကျယ် လွှမ်းမိုးထားပါတယ...
By Yoe Ma Lan 8:06 AM
ကျွန်မနဲ့သူကချစ်သူတွေပါ။ လက်ဖက်ရည်ကြိုက်တတ်တဲ့ ကျွန်မဟာဆိုင်မှာပူပူလေးထိုင်သောက်ရတာကို နှစ်သက်ပါတယ်။ အဲဒီအခါသူပြောလေ့ရှိတာကတော့“မင်းကွာ…အပျိုလေးတန်မဲ့ ဆိုင်ထိုင်ရသလား” တဲ့ ။ ကျွန်မ အော်ရယ်ပစ်လိုက်တယ်.. လူတွေအများကြီးရှေ့မှာပါပဲ… ဆိုင်ထိုင်ဖို့ရာကို သင့်တော်တယ်ဆိုတဲ့ဆိုင်မှာ ရိုးသားတဲ့အရည်ကို ရိုးသားစွာသောက်နေတာပါရှင် ၊ ဒါပေမဲ့ မဖြေရှင်းတော့ပါဘူး ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင် မဖြေရှင်းပဲ ရွေးတဲ့လမ်းကို ဖြောင့်အောင်လျှောက်တတ်တာ ကျွန်မအကျင့်ကိုး ၊ ဟော…ထပ်ပြောပြန်ပြီ.. “မင်းကွာ…အပျိုလေးဖြစ်ပြီး ရယ်တာကြီးကိုက ” တဲ့ ၊ ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်မမဖြေရှင်းပါဘူး ။ စာရင်းကိုင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မဟာတခါတရံအလုပ်များပါတယ်၊အဲဒီအခါ အိမ်ပြန်နောက်ကျတတ်တဲ့ ကျွန်မကို“မင်းကွာ…အပျိုဆိုတာ အိမ်ပြန်သိပ်မိုးမချုပ်သင့်ဘူး” တဲ့ဒီလို…ဒီလိုနဲ့ပဲ ချစ်သူဘ၀ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးတော့ သူလဲနိုင်ငံခြားကို အလုပ်လုပ်ဖို့ထွက်သွားပြီပေါ့ ။ -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- သူနိုင်ငံခြားသွားလို့သိပ်မကြာခင်မှာပဲကျွန်မတပည့်တယောက်ရခဲ့တယ်၊ နာမည်ကချောချောတဲ့..။ ကောင်မလေးရဲ့ မျက်နှာမှာအထင်ရှားဆုံးကတော့ ပါးနှစ်ဘက်လုံးမှာပါတဲ့ ပါးချိုင့်ပါပဲ။ LCCI(3)ကို ချောချောအိမ်မှာ Guide လုပ်ပေးဖို့ပေါ့ ၊ စာမေးပွဲဖြေဖို့နီးကပ်လာတဲ့တစ်နေ့မှာ မအောင်မှာစိုးတဲ့ကျွန်မ စာပြဖို့စောစောအရောက် ချောချောဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့ ဆီးပြောတာနဲ့ ဆေးရုံကိုလိုက်သွားမိတယ်။ ကိုယ်ဝန်(၂)လရှိတာသိလို့ စိတ်ညစ်ပြီး ပိုးသတ်ဆေးသောက်တာတဲ့ ၊ လူဦးလို့ပေါ့ ၊ မသေကောင်းမပျောက်ကောင်းရှင် ၊ ကျွန်မလဲအားပေးစကားပြောပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်မစိတ်ထဲ မရှင်းဘူးရှင် ၊ ကျွန်မသိသလောက်တော့ ချောချောဟာ အိမ်သားတွေမပါဘဲ အပြင်မထွက်တတ်ဘူးရှင့်..၊ ရော်…ဘာတွေလဲကွယ်…။ အဲဒီနေ့ကတည်းက စကားပြောရင် ဖြေးညှင်းစွာ ၊ရယ်ရင်လည်း တိုးတိုးလေးရယ်တတ်တဲ့ ပါးချိုင့်နှစ်ဘက်နဲ့ချောချောကို နောက်ထပ် မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ အချိန်တွေကြာလာခဲ့ပြီး တနေ့မှာတော့ ဖိတ်စာတစ်စောင်နဲ့စာအိတ်တစ်လုံးကို ကျွန်မရခဲ့တယ်။ ဖိတ်စာကတော့ ကျွန်မရဲ့တစ်ယောက်ထဲရှိခဲ့သောချစ်သူရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာပေါ့ ၊ ဆက်ဆက်လာပါတဲ့ ။ သွေးကြောင်ရင် ဘေးချောင်မှာရပ်နေမှာပေါ့ ၊ ကျွန်မဆက်ဆက်သွားမှာပါ ။ စာအိတ်ကလည်း သူရေးထားတဲ့စာပါပဲ ၊ဆက်ဖတ်ဖို့မလိုအပ်တော့ဘူးလို့ထင်တာနဲ့ ဒီတိုင်းပဲပစ်ထားလိုက်တယ် ။ မင်္ဂလာဆောင်ရက်မှာ အသဲမကွဲဘူးဟေ့လို့ ပြချင်တဲ့ကျွန်မ အလှဆုံးကိုပြင်ပစ်လိုက်တယ် ။ အချစ်ဦးနဲ့လွဲရပေမဲ့ အချစ်ဆုံးနဲ့ဆုံနိုင်ခွင့် ရှိပါသေးတယ်ရှင် ၊ အချစ်မပါဘဲ ဘ၀ကိုအောင်မြင်အောင်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ သူတွေမှအများကြီးပါ ။ ဟော..လာနေပြီ..မင်္ဂလာမောင်နှံ ၊ သူရွေးတဲ့သတိုးသမီးကို သေသေချာချာကြည့်မှ.. ပါးချိုင့်..သတိုးသမီးမျက်နှာပေါ်က ထင်ရှားလှတဲ့ ပါးချိုင့် .. ချောချော..သြော် သတိုးသမီးက ချောချော ကိုး ။ အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ဖွင့်ဖောက်ဖတ်ဖို့ မလိုအပ်တော့ဘူးလို့ထင်ပြီး ပစ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့စာကို ချက်ချင်းဖွင့်ကြည့်မိတယ် ၊ စာထဲပါတာကတော့.. ” ငါပြန်လာတာ နင့်ကိုအသိမပေးတာက အိမ်ထောင်ပြုတော့မှာမို့ပဲ ၊ အိမ်ကရှာပေးတာ ၊ ငါလဲနှစ်သက်တယ် ၊ သူ့မှာ ငါကြိုက်တဲ့ အပျိုစင်အချက်တွေရှိတယ် ” ပါသတဲ့ရှင်… ကျွန်မ ဒီစာကို မှန်ဘောင်သွင်းပြီး ရွှေကွပ်ထားလိုက်ချင်မိတယ် ကျွန်မကို တသက်လုံးရယ်နေအောင်လုပ်ပေးမဲ့ ဟာသစစ်စစ်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့ ။ ကျွန်မလေ ၀တ္တုမရေးတတ်လို့ပါ ၊ ရေးများရေးတတ်ရင်ဖြင့် ၀တ္တုခေါင်းစဉ်ကို” ဘယ်သူ အပျိုစစ်ပါသလဲ ” လို့ ပေးမိမှာပါ ပဲ ရှင် ။
-------------------------------------------------------------- ကျွန်မနဲ့သူကချစ်သူတွေပါ။ လက်ဖက်ရည်ကြိုက်တတ်တဲ့ ကျွန်မဟာဆိုင်မှာပူပူလေးထိုင်...
By Yoe Ma Lan 1:54 AM
လူလောကကြီးက အကုန်လုံးအတွက် တူညီသော အခွင့်အရေးကို ပေးလိမ့်မယ်လို့ မထင်ပါ။
လူလောကကြီးအကြောင်း အသက် ၂၀ မတိုင်ခင်မှာတော့ မိဘတွေက သိပ်ပြီးပြောမှာမဟုတ်ပါ။
အသက် ၂၀ ကျော်လာပြီပြန်ရင်လည်း ကိုယ်ရဲ့သားသမီးကို လူ့လောကကြီးအကြောင်းကို သင်ပေးသူရှိသလို မသင်ပေးသူလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။
မသိသေးသောသူများအတွက် အသက် ၂၀ ပတ်ဝန်းကျင်အရွယ်မှာ ဘာကိုလုပ်သင့်သလဲဆိုတာကို ပြောပြပါရစေ။
၀၁. အလုပ်က အရေးကြီးပါတယ်။
အလုပ်ရှိဖို့ဆိုတာ အရေးကြီးသော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းတတ်နေသေးရင်တော့ အလုပ်လုပ်ဖို့မလိုပင်မဲ့ ကျောင်းပြီးရင်တော့ အလုပ်ကို လုပ်ရပါတော့မယ်။
အလုပ်ဝင်တဲ့အချိန်ကနေစပြီး ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကြီးက အလုပ်ထဲမှာပဲ အချိန်ကုန်နေတယ်လို့ မတွေးပါနဲ့။ ကိုယ်က စိတ်ပါဝင်စားလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကို ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။
ဒါမှသာလျှင် အလုပ်ကနေ ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း လမ်းကြောင်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ပင် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မှာပါ။
၀၂. အားလုံးကို သိရန်မလိုပါ။
လောကမှာ ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကို သိသင့်သလောက်သာ သိဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တဲ့ နည်းပညာတွေကိုပါ အချိန်ယူပြီး လေ့လာနေရင်တော့
ကိုယ်က တကယ်လုပ်ရမဲ့အလုပ်က ဖြစ်သင့်သလောက်ဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်ပါ။
အသိဥာဏ်ဆိုသောအရာဟာ ချက်ချင်းမေ့သွားလေ့ရှိပါတယ်။ ပျော်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်စေ၊ ဝမ်းနည်းနေသောအချိန်ဖြစ်ရင် ဖြစ်စေ၊ မမှတ်ထားရင်တော့ မေ့သွားပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှတ်တမ်းကို မေ့သွားပြီဆိုရင်တော့ နှမြောစရာပါ။ အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကို ပြန်ဖတ်နိုင်သလို ကောင်းချက်လေးတွေ၊ ပြင်ဆင်ရမဲ့အချက်လေးတွေကို
၀၄. ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက်ကို သိအောင်လုပ်ပါ။
ကိုယ်က ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကို သိအောင်လုပ်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အကြောင်းကို ကိုယ်တိုင်နားမလည်ရင် သူများကဆိုရင် ပိုဆိုးပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ရဲ့အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေကို သိမှသာလျှင် ကိုယ်ရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်အတိုင်း တက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုလည်း စဉ်းစားနိုင်မှာပါ။
၀၅. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကင်းဝေးလာလိမ့်မယ်။
ကျောင်းတုန်းကလို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဝေးလေးဝါးလား လုပ်ဖို့အချိန်ဆိုတာလည်း နည်းလာပါလိမ့်မယ်။ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ဘယ်ကိုရောက်လို့ရောက်မှန်း မသိတော့ပါ။
ယခုလက်ရှိ သူငယ်ချင်းတွေကို တန်ဖိုးထားစေချင်ပါတယ်။
၀၆. အဆင်ကို မပြေတာပါ။
အလုပ်ခွင်ထဲရောက်ပြီဆိုရင် အလုပ်ကိစ္စတွေ၊ မိသားစုကိစ္စတွေနဲ့ အဆင်ကိုမပြေနိုင်သော အချိန်ကာလတွေကို ဖြတ်သန်းရမှာပါ။
ပြသာနာတခုကို ဖြေရှင်းပြီးသွားလို့ ခဏလေးနားမယ်လုပ်တုန်း နောက်ပြသာနာတခုက ပေါ်စမြဲပါ။ ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာပါ။
ဖြစ်ခဲတဲ့အကြောင်းကို အကောင်းချည်းပဲမှတ်ပြီး ရယ်ပစ်လိုက်စမ်းပါ။ အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေဟာ အချိန်အတိုင်းအတာတခုကို လွန်မြောက်သွားရင်တော့ ရယ်စရာတွေပါ။လောကကြီးမှာ လိုက်ရောညီထွေစွာ နေထိုင်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ဘဝ ရည်မှန်းချက်တွေ အောင်မြင်ဖို့အတွက် သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီးမှ စနစ်တကျ တဆင့်ပြီးတဆင့်ပြီး လှေကားတက်သလို သွားပါ။
ငယ်သေးတယ်လို့ခံယူထားပြီး ဘာမှမစဉ်းစားပဲ လုပ်ကွာ လို့ စိတ်ထဲထင်ရာတွေကို လုပ်ရင်တော့ အောင်မြင်ဖို့ ခဲယင်းပါတယ်။
ငယ်တဲ့အချိန်မှာ လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံမရှိတာ အားလုံး အလားတူပါပဲ။ သုံးသင့်သောနေရာမှာတော့ ပိုက်ဆံကို သုံးဖို့ မနှေမြောပါနဲ့။
၀၉. အလုပ်ဆိုတာ ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
လူဘဝမှာ အနှစ်၄၀လောက် အလုပ်လုပ်ရမှာပါ။ တကယ်လို့အလုပ်မှာ အဆင်မပြေသလို ကိုယ်နဲ့မကိုက်သောအလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အလုပ်ကိုပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
ကြိုးစားပြီး သည်းခံပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်မှာ စိတ်မပျော်သလို ဆက်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတော့ရင် အလုပ်ကို ပြောင်းကြည့်ပါ။
၁၀. ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်ပါနဲ့။
အလုပ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် သူကဘယ်လိုထင်မလဲလို့ အမြဲတွေးပြီး စဉ်းစားနေရင်တော့ ကြာလာရင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းချက်တွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ယုံမယုံတော့မသိပါ။ သင့်ကို ပတ်ဝန်းကျင်က ကိုယ်ထင်သားသလောက် ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာကိုပါ။ ကိုယ်စိတ်ထဲမှာသာ ထင်ထားတာပါ။ လက်တွေ့မှာတော့ ကိုယ့်အတွက်ပဲ ကိုယ်ကြည့်ကြမှာပါ။
မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ရပင်မဲ့ လုပ်ကြည့်ချင်တယ်လို့ စိတ်ထဲမှာတွေးမိရင် လုပ်ကြည့်ပါ။ လုပ်ကြည့်မှသာလျှင် ဖြစ်မဖြစ်သိမှာပါ။
ဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့တော့ ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်သလို၊ အောင်မြင်မှာလဲ မဟုတ်ပါ။ ချော်လဲမှာကို မကြောက်သောသူသာလျှင် ပန်းတိုင်အထိကို ပြေးနိုင်မှာပါ။
၁၂. သူများနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ပါ။
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း သူများနဲ့ယှဉ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်ကဘယ်လို အခြေအနေလဲဆိုတာကို ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၁၃. အောင်မြင်မှုအတွက် ဖြတ်လမ်း မရှိပါ။
အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေမှာ ဆုံးရှံးမှုတွေ၊ ဝမ်းနည်းစရာတွေ၊ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ပြည့်နှပ်နေပါတယ်။
လွယ်လွယ်နဲ့တော့ သူဌေးမဖြစ်နိုင်ပါ။ လောကဒဏ်ကို ခံပြီးမှသာလျှင် အောင်မြင်ခြင်းပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိမှာပါ။
Credit: Chelmo Team
------------------------------------------------------------------------------------ လူလောကကြီးက အကုန်လုံးအတွက် တူညီသော အခွင့်အရေးကို ပေးလိမ...
By Yoe Ma Lan 1:49 AM
တစ်ခါတုန်းက ခဏခဏစကားများတတ်ကြတဲ့ လင်မယားနှစ်ယာက်ရှိတယ်။
ဒါပေမယ့်စကားများတဲ့အခေါက်တိုင်း ယောက်ျားဖြစ်သူက အလျှော့ပေးတတ် တယ်။
တစ်ခါမှာတာ့ အမျိုးသမီးက သူ့ယောက်ျားကို ထူးဆန်းလို့မေးလာမိတယ်။
"ယောင်္ကျားရေ.. ရန်ဖြစ်တိုင်း ရှင်ဘာလို့ ကျွန်မကို အလျှော့ပေးတာလဲ။ တစ်ခါတစ်လေကျ ကျွန်မဘက်က မှားတာလည်းရှိတယ်လေ"
သူ့ယောင်္ကျားဒီလို ပြန်ဖြေတယ်။ "မင်းက ကိုယ့်မိန်းမ လေကွ။ဘာပဲပြောပြော ရှေ့ ဘဝက ရေစက်ကြုံလို့ ဒီဘ၀မှာ လင်မယားလာဖြစ်ကြတာ။ ကိုယ်ပြောတာ နိုင်သွားတော့ရော ဘာထူးမှာလဲ။ စကားနိုင်ပေမယ့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှုံးသွားမှာလေ။ ဒီဟာတော့ ကိုယ် အရှုံးမခံနိုင်ဘူး။ တစ်ယောက်ကဆူလိုက် တစ်ယောက်က ရယ်လိုက်။ တစ်ယောက်က စိတ်တိုလိုက် တစ်ယောက်ချော့လိုက်။ တကယ်လို့ လူတစ်ယောက်က အမြဲတမ်း အရှုံးပေးနေရတယ်ဆို သူ စကားပြောမကျွမ်းကျင်လို့မဟုတ်ဘူး။
တဖက်သားကို အနာကျင်ဆုံးဖြစ်စေမဲ့စကားမျိုး ပြောမထွက်ရက်လို့ပေါ့။
တစ်ယောက်ယောက်တော့ အရှုံးပေးမှ နှစ်ယာက်လုံး ပျော်ရွှင်နိုင်မှာလေ။ စကားနိုင်သွားပေမဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတော့ ဆုံးရှုံးသွားရလိမ့်မယ်
ဒီအရာကိုတော့ ငါတို့ အရှုံးမခံနိုင်ပါဘူး" .. တဲ့။
Credit : ငွေတာရီ
------------------------------------------------------------------------------ တစ်ခါတုန်းက ခဏခဏစကားများတတ်ကြတဲ့ လင်မယားနှစ်ယာက်ရှိတယ်။ ဒါပေ...
By Yoe Ma Lan 12:29 AM
ခပ်ဟော့ဟော့လေး လှနေတဲ့ မော်ဒယ် ဘေဘီမောင် ပါ
Myanmar Hottie Model Girl : Baby Mg
Job : Model and Actor
Date of Birth: February 22, 1991
Education: Second Year (Myanmar)
Race : Burmese-Karen
Facebook: Baby Mg Mg
Hobby: Photo Modeling
Model Agency: Star Model Agency
Make Up : Myat Noe Kyaw (Facebook - artist Myat Noe Kyaw)
Myanmar Hottie Model Girl : Baby Mg Nick Name: - Job : Model and Actor Date of Birth: February 22, 1991 Relationship Status : Single Educat...
By Yoe Ma Lan 12:25 AM
Model Ei Nu Wai: Gorgeous Angel With Perfect Curve
# ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအလှနဲ့ မျက်နှာသစ် မော်ဒယ်မလေး အိနုဝေ
# Myanmar New Face Model : Ei Nu Wai
# Date of Birth:
# Race :
# Relationship Status :
# Height :
# Model Agency:
# Photos by Moe Paing Soe
# ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအလှနဲ့ မျက်နှာသစ် မော်ဒယ်မလေး အိနုဝေ # Myanmar New Face Model : Ei Nu Wai # Date of Birth: # Race : # Relati...
By Yoe Ma Lan 12:22 AM
Beautiful New Face Model, Khay Sett Thwin's Fashion
# ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှနဲ့ မျက်နှာသစ် မော်ဒယ် ခေးဆက်သွင်
# Myanmar Beautiful New Face Model: Khay Sett Thwin
# Date of Birth: March 21, 1991
# Race : Burmese-Shan
# Relationship Status : Single
# Education: B.A (English)
# Height : 5’ 5”
# Weight: 110 lbs
# Facebook: Khay Khay
# Hobby: Acting, Reading, Dancing
# Model Agency: Talents & Models Agency
- 2nd Runner Up Winner of Miss Beautiful Footstep 2011
- Best Smile Award Winner of Miss People 2011
# ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှနဲ့ မျက်နှာသစ် မော်ဒယ် ခေးဆက်သွင် # Myanmar Beautiful New Face Model: Khay Sett Thwin # Date of Birth: March 21, 1991...
By Yoe Ma Lan 12:18 AM
မြန်မာကလည်း ကမ္ဘာကြီးကို ဤသို့ခြိမ်းခြောက်နိုင်ပါပြီ
မြန်မာကလည်း ကမ္ဘာကြီးကို ဤသို့ခြိမ်းခြောက်နိုင်ပါပြီ
By Yoe Ma Lan 12:17 AM
ကိုယ်အရမ်း~ လွမ်းနေပြီ~ အချစ်ရေ~~~~
By Yoe Ma Lan 12:16 AM
By Yoe Ma Lan 9:57 PM
ဟန်းဖုန်း ခေါင်းအုံး မအိပ်ပါနှင့်..။
ခေါင်းမအုံးဘူး။ ဘေးမှာပဲ ထားအိပ်တယ် ဆိုလည်း မရပါဘူး။
အနည်းဆုံး လေးပေ၊ ငါးပေ လောက်တော့ ခွာပြီး ထားရမယ့်
ပစ္စည်း ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဆီကနေ ထွက်တဲ့ ရေဒီယို ဓာတ်ကြွ
ရောင်ခြည်က ရောဂါ အမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ် စေပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ် ပြင်ပ အရေပြားကစလို့ အတွင်း အထိကို ထိပါတယ်။
အနီးစပ်ဆုံး ကတော့ ဦးနှောက်ကို ထိပြီး အသက်ကြီး လာတဲ့ အခါ ပိုမို ခံရပါတယ်။ဦးနှောက် အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ အရေအပြားနဲ့ ဆဲလ်များဟာ
အင်မတန် နူးညံ့ပြီး နေ့စဉ် ထိတွေ့ နေတဲ့ ဓာတ်ရောင် ခြည်ကြောင့် သေဖို့ ပိုများပါတယ်။
ရှင်သန်မယ့် ဆဲလ်အရေ အတွက်ထက် သေတဲ့ ဆဲလ်ပိုများတဲ့ အခါ ရေရှည်မှာ ဦးနှောက် သောတို့၊ ဦးနှောက် ကင်ဆာ တို့ကိုတောင် ဖြစ်ပေါ် စေနိုင် ပါတယ်။
ယနေ့ ကမ္ဘာရဲ့ ခေတ်မှီ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုမှာ လူတိုင်းဟာ ဓာတ်ရောင်ခြည် အမျိုးမျိုးနဲ့ ထိတွေ့ နေရပြီး ဒါတွေကို သိရှိ နားလည်လို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ကြဉ်တတ်ရန် လိုအပ်တယ်လို့ တိုက်တွန်း ထားကြောင်း သိရပါတယ်။
------------------------------------------------- ဟန်းဖုန်း ခေါင်းအုံး မအိပ်ပါနှင့်..။ ခေါင်းမအုံးဘူး။ ဘေးမှာပဲ ထားအိပ်တယ် ဆိုလည်း မရပါဘူး။ ...
အဆီဆဲလ်တွေ အမြန်ဆုံး နိမ်နင်းပေးမယ့် ဖြည့်စွက်ဓာတ်စာ
အသည်းက လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိ နားလည်ရ အခက်ဆုံးနဲ့ အရေးကြီးဆုံး အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ မြောက်များစွာသော လုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်...
B သွေး အကြောင်း သိကောင်း စရာ
============================================ B သွေးများဟာ တစ်ယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေး နေချင်ကြသူများဖြစ် ကြပါတယ် အားတဲ့အချိန်တိုင်းအခန်းထဲမှာတ...
မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ လူတွေမှားယွင်း လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ အချက် (၁၀) ချက်
====================================================== မျက်နှာသစ်တယ်ဆိုတာ အလှအပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေထဲ ရှုပ်ထွေးမှု အနည်းဆုံး အပိုင်...
၁၀ မိနစ်အတွင်း အိပ်ပျော်သွားစေမယ့် တရုတ်ရိုးရာ သဘာဝအိပ်ဆေး
အိပ်မပျော်မျက်စိကြောင်ခြင်းဟာ တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ အရှေ့တိုင်းဆေးဝါးဖြင့် ထိရောက်စွာ ကုသနိုင်တဲ့ ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအိပ်မပျော်မျက်စိကြောင...
Tel - 09796006080
Copyright 2016 ®YomaLan